Licence to ….?? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » Licence to ….??
Licence to ….??
Posted by ဦးဦးပါလေရာ on Feb 28, 2014 in Aha! Jokes, Satire, Society & Lifestyle | 36 comments
သူ ခြေလှမ်းကျဲကျဲနဲ့ မှန်မှန်ဖြတ်လျှောက်သွားတဲ့ ကမ်းခြေတစ်လျှောက် မှာ နေဆာလှုံနေတဲ့ မိန်းမပျိုလေးတွေ ခေါင်းထောင်ကြည့် လှမ်းမျှော်ကြည့် ငေးမောကြည့်ရစ်ကြမှာကို သိနေလျှက်နဲ့ ဘာကိုမှ ဂရုမစိုက်ပဲ ရှေ့ကိုပဲကြည့်ပြီး ဆက်လျှောက်သွားဖြစ်သည်။ အဲဒါတောင်မှ ရှေ့ ခပ်လှမ်းလှမ်းက ရွှေဝါရောင်ဆံပင်နဲ့မိန်းမချောလေး ဖြတ်ကနဲလှမ်းကြည့်လိုက်တာကို မြင်ဖြစ်အောင်မြင်မိလိုက်သေးသည်။
သူမအနီး နှစ်လှမ်းအကွာလောက်အရောက်မှာတော့ သူမက ရုတ်တရက် ထ ရပ်ပြီး လှည့်အထွက် ပန်းရောင်ကာဗာနဲ့ဖုန်းကလေး ကျ ကျန်ရစ်သည်။ သူက ခြေလှမ်းကျဲကျဲဖြင့် သွားနေရင်းမှ ဖုန်းကလေးကို ကောက်ကာ တဆက်တည်း ရှေ့ကိုလှမ်း၍ သူမရဲ့လက်ကလေးကို လှမ်းဆွဲရပ်တန့်စေလိုက်သည်။
“နောက်ဆို ဒီလို ဖုန်းကလေးတွေကို ခဏခဏ တမင်လွှတ်မချနဲ့နော်..။ ဒါက အိုင်ဖုန်းမို့လို့…..။ ဟွာဝေးသာဆိုရင် မော်ဒယ်ချိန်းလိုက်ရပြီ…. ”
နဲနဲလေးမှ ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဖြစ်မသွားတဲ့သူမက ရယ်ကျဲကျဲ ညုတုတုလေးပြုံးရင်း လက်ညှိုးလေးထောင်လို့ စူးစမ်းပြန်သည်………..
“ သူ ….. က…. ”
“ မိုက်စ်….။ ဂျိမ်းစ် မိုက်စ် ….။ ”
မုန်တိုင်းကလဲ ထန်နေသည် ……..
အေးစိမ့်နေတဲ့ နေရာလေးမှာ …….
မီးတောင်တွေ တ၀ုန်းဝုန်း ပေါက်ကွဲနေ……..
ချိတ်ကလေးကို အထိ ……….
တီ…. တီ…. တီ…. တီ….. တီ…. တီ….
နာရီကို လှမ်းယူပတ်ရင်း တုံးတိတိ ပြောလိုက်သည်။
တဖက်ကို လှည့်အဆင်းမှာ ….
ဘယ်ဘယ်လက်နဲ့ ခေါင်းအုံးအောက်က အသာလေးဆွဲထုတ်လာတဲ့
ဝေါ်တာပီပီကေ သေနတ်ကလေးက အလင်းရောင်မှာ လက်ကနဲ ဖြစ်သွားသည်။
ဇီးရိုး…. ဇီးရိုး…. ဇီးရိုး…. ဆဲဗင်း…..
ဘယ်ဘက်လက်ဆစ်လေးချောင်းနဲ့ အတွဲလိုက် ခပ်ဖွဖွခေါက်ပြီး….
နူးညံ့တဲ့အပြုံးနဲ့ စောင့်ကြိုနေတဲ့ မျက်နှာလေးကို မြင်လိုက်ရသည်…။
ခင်ဝင့်ဝါနဲ့ တထပ်တည်းလောက်နီးနီးတူတဲ့ မိန်းမချောလေးကို နှုတ်ဆက်လိုက်သည်..။
“ ဟဲလို… မစ္စ မန်နီပဲန်နီ…….. ”
“ ဟဲလို…. မိုက်စ်..။ သိပ်ပင်ပန်းနေလားဟင် … ။
အချိန်ယူပြီး နားနားနေနေ နေလိုက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်….. ”
“ ကိုယ်ခွင့်တင်ပြီး အနားယူတဲ့အခါ မင်းကိုလဲ ခေါ်သွားမယ်လေ…။
ဟာဝိုင်ယီမှာ နှစ်ပတ်လောက် ၊ ဖူးခက်မှာ နှစ်ပတ်လောက်၊ ပြီးတော့ ဘာလီကျွန်း…….. ”
“ အို…….. ။ တကယ်လား မိုက်စ်ရယ်…. တကယ်ပြောတာလို့ ယုံလိုက်မယ်နော်….. ”
အဲသည်အခိုက် ဘာမှမရှိတဲ့နံရံပြောင်ချောကြီးထဲက စပီကာသံထွက်လာသည်……..
“ အခုလေးတင် ကမ်းခြေဟိုတယ် ဘန်ဂလိုကထွက်လာတဲ့ မစ္စတာ မိုက်စ်ကို
နားနားနေနေဧည့်ခံဖို့ မလိုလောက်ပါဘူး မစ္စ မန်နီပဲန်နီ…
ရုံးခန်းထဲ လွှတ်လိုက်လို့ရပါပြီ…… ”
တိတ်တခိုးသက်ပြင်းလေးကို အပြုံးချိုချိုလေးနဲ့ မလုံ့တလုံဖုံးဖိရင်း မစ္စပဲန်နီက
နံရံ မှာ ၀င်ပေါက်တစ်ခု ပေါ်လာသည်…။
ဂျိမ်းစ် မိုက်စ် တစ်ယောက် ၀င်ပေါက်ကိုဖြတ်ပြီးဝင်လိုက်တော့ ရုံးစားပွဲရှည်ကြီးရှေ့မှာ ထိုးထိုးထောင်ထောင် မတ်တပ်ရပ်နေတဲ့ M ကို တွေ့ရသည်။
“ အီးဗနင်း …မိုက်စ်..
ဆင်းရဲ ကြတယ်… ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးနေကြတယ်…
လူတွေ အသိပညာလဲ အလွန်အမင်းနိမ့်ကျနေကြတယ်
ဗိုလ်ကျ စိုးမိုး နှိပ်စက်ကလူပြုမှု့တွေလဲ နေရာတိုင်း အချိန်တိုင်းမှာဖြစ်နေပြီး
အဲဒါကိုက ပုံမှန်ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်လိုဖြစ်နေတာ အဆိုးဆုံးပဲ……. ”
“ အဲဒါ… ဘာရုပ်ရှင်ကားလဲ ဆရာ…. ဘယ်ရုံမှာ ပြနေတာလဲ……
ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာကတော့ … အပြင်မှာလက်တွေ့မဖြစ်နိုင်တဲ့ အနိဌာရုံ ဇတ်လမ်းတွေ သိပ်မကြည့်စေချင်ဘူး…. ။ စိတ်ပင်ပန်းတာပေါ့..။”
“ အဲဒါ တွေက မင်းတို့တိုင်းပြည်မှာ လက်တွေ့ဖြစ်နေတာ.. ထရစ်ပယ်အိုဆဲဗင်း…။
အဲဒါတွေအားလုံးရဲ့အစက ဥပဒေ မစိုးမိုးတာ၊ စည်းကမ်းမရှိတာ…. ။
ဒါတွေကို အခုမှ မဖြေရှင်းရင် နောင်မကြာခင် အင်မတန်ဆိုးရွားတဲ့ လူ့အသိုင်းအ၀န်းတစ်ခု ကမ္ဘာဂြိုလ်ပေါ်မှာ ဖြစ်တည်လာတော့မယ်……။ ငါတို့တစ်ခုခုဝိုင်းလုပ်မှဖြစ်မယ် မစ္စတာမိုက်စ်..။”
ပြောပြောဆိုဆို လမ်းလျှောက်ထွက်လာတဲ့ M က ညာဖက်လက်ကို အသာဝှေ့ယမ်းလိုက်တော့ ဘေးက နံရံမှာ တံခါးပေါက်ကျယ်ကျယ်တစ်ခု ပေါ်လာသည်။ M ရဲ့နောက်က ခပ်ခွာခွာ အသာလျှောက်လိုက်သွားလိုက်တော့ တံခါးအလွန်မှာ အသင့်စောင့်နေတဲ့ Q ကို တွေ့လိုက်ရသည်…။ သူ့လက်ထဲမှာတော့ လက်တ၀ါးသာသာ ဗူးလေး တစ်ခုကို ဖွင့်လျှက်သား ကိုင်ထားလေသည်…..။
M က သူ့ကို လှည့်ကြည့်ရင်း စကားကိုဆက်သည်….
“ ဒီတော့ မစ္စတာမိုက်စ်….
ကျုပ်တို့က ပြဿနာရဲ့ အရင်းအမြစ်ကို ရှင်းရမယ်….
အရင်းအမြစ်ကတော့ စည်းကမ်းမဲ့တာ၊ ဥပဒေမဲ့ ပြုမူနေထိုင်လေ့ရှိတာတွေပဲ….
ဒီအတွက် Q က လက်စွမ်းပြထားတာလေးကို ကြည့်လိုက်ဦး…….. ”
M က မေးဆတ် ခေါင်းညိတ်ပြတာနဲ့တစ်ဆက်ထဲ Q က ဘယ်ဘက်လက်ခလယ်ကလေးကို အသာအယာလှုပ်ရှားလိုက်ရာ ရှေ့တွင်ကာထားသော မှန်လိုနံရံကြီးလေးစိတ်ကွဲပြီး ဘေးသို့ဝင်သွားသည်….
အဲ… နေပါဦး … သူ့လယ်ထွန်စက်က အပေါ်မှာလဲ ထိုးထိုးထောင်ထောင်တွေနဲ့ ဘေးမှာလဲအမြှောင်းအမြှောင်းတွေနဲ့……..
ကြည့်ရတာ လယ်ထွန်စက်တင်မက- ကောက်ရိတ်ချွေလှေ့စက်နဲ့ပါ တွဲထားတာလားမသိ…!!
Q ရဲ့ ၀မ်းမြောက်ဂုဏ်ယူနေတဲ့ ပီတိဆီစိမ်ထောပတ်သုတ်အသံကြီး ပေါ်လာသည်……..
“ အပေါ့စားတင့်ကားတစ်စီးရဲ့ စွမ်းရည်ပေါ့ ဂျိမ်းစ်….
ဗွီအိတ် ရှစ်လုံးထိုး ဒီဇယ်အင်ဂျင်က ဆောလစ်တာယာ ခြောက်လုံးကို
တစ်နာရီ ကီလိုနှစ်ရာအထိ လှည့်ပေးမယ်….။
ဆယ့်ရှစ်လွှာပါတဲ့ သံချပ်ကာကိုယ်ထည်က မောင်ရင့်ကို အမြောက်ဆံတိုက်ရိုက်ထိတာတောင် အိပ်ရေးမပျက်အောင် ကူညီလိမ့်မယ်။
ရေဒါ၊ လေဆာ အင်ဖရာရက် တွဲဖက်လမ်းညွှန်စံနစ် ဂျီပီအက်စ် နေရာမှတ်စံနစ်တွေနဲ့ လည်ပတ်မယ့် လက်နက်ခြောက်စုံ၊ အပေါ့စား စက်အမြောက်၊ လျှပ်စစ်သံလိုက် ခွင်းဗုံး၊
$ # @ % &….. ”
“ အဲဒါကြီးနဲ့ စစ် သွားတိုက်ရမှာလား….. ”
“ သွားတိုက်ရမှာတော့ ဟုတ်တယ် ဂျိမ်း…
ဟောသည်မှာ မောင်ရင့်အတွက်….. ”
ပြောပြောဆိုဆို လှမ်းပေးလိုက်တဲ့ Q ရဲ့ လက်ထဲက ဗူးလေးထဲမှာက လက်ပတ်နာရီလိုလို……
“ အော်…. ဒါ … နောက်ဆုံးထုတ် ဆမ်ဆောင်းဂယ်လက်ဆီဂီယာထင်တယ်….. ”
“ ဒီမှာ မစ္စတာမိုက်စ်…….
ကျုပ်တို့ရဲ့ MI6 အထူးလက်နက်ဌာနခွဲက
အပေါစားရောင်းတမ်းပစ္စည်းမျိုးတွေ ထုတ်လုပ်လေ့မရှိပါဘူး……… ”
စ လိုက်မိတာ လက်လွန်သွားသမို့
စိတ်ဆိုးသွားတဲ့ Q ကို အမူအယာဖြင့်တောင်းပန်ရင်း စကားဆက်ဖို့ မေးဆတ်ပြလိုက်တော့-
“ သေသေချာချာ ကြည့်ထားပါ ဂျိမ်းစ်….
ဒီနာရီကိုပတ်လိုက်တာနဲ့ နာရီက မောင်ရင့်ကို မှတ်သားလိုက်ပြီဖြစ်ပြီး မောင်ရင်တစ်ဦးတည်းကသာ ထိန်းချုပ်နိုင်တော့မှာ…..
ဒီနာရီကိုပတ်ထားရင် မောင်ရင့်အနေနဲ့ ကားထဲမှာဖြစ်ဖြစ် ကားအပြင်ကဖြစ်ဖြစ် ကားတစ်စီးလုံးနဲ့ ကားထဲက မောင်းနှင်စံနစ် လက်နက်စံနစ် အားလုံးကို ထိန်းချုပ်နိုင်မယ်…..
ဥပမာ- ကားစက်နှိုးတာ ၊ ကားစက်ရပ်တာ၊ ကားမောင်းတာ၊ ဘရိတ်အုပ်တာ၊ ကားမှန် တင်ချ တာ၊ မီးဖွင့် အချက်ပြဖွင့်တာ၊ စပီကာဖွင့်၊ သတိပေးလေဆာတွေဖွင့်တာ၊ ကားနဲ့တွဲပါတဲ့ ဒရုန်း လူမဲ့ယာဉ် နှစ်ခုကိုထိန်းချုပ်တာ၊ ကားထဲက လက်နက်တွေ အသုံးပြုတာတွေ ပေါ့…။
လက်ဟန်ခြေဟန်အမျိုးပေါင်း ခြောက်ဆယ်ကို ကိုယ့်အမှတ်အသားနဲ့ကိုယ် ကပ်စတန်မိုက်လုပ်ပြီး သတ်မှတ်ထားနိုင်တယ်…”
“ အဲဒါကြီးနဲ့ အဲဒါကြီးထဲက လက်နက်တွေ ဘယ်လိုအသုံးပြုရမယ် ဆိုတာလေး…..”
“ ဒီကားကြီးကို ရန်ကုန်မြို့ထဲ လှည့်မောင်းပြီး စည်းကမ်းမရှိတဲ့ သူတပါးကို ပိတ်ဆို့ နှောက်ယှက်နေတဲ့ အရာတွေကို ရှင်းရမှာပေါ့ မောင်ရင်…..
မောင်းတယ် …. ဆိုပေမယ့် လို့လဲ ဖူးလီး အော်တို ဒရိုက်ဗ် စစ်စတမ်မို့ မောင်ရင်က ထိုင်ကြည့် ဆုံးဖြတ်ရုံပါပဲ…။ မောင်ရင့်ရှေ့မှာ စတီယာရင်အစား ပလာစမာ စခရင်နဲ့ ဆင်ဆာပေါင်း တစ်ရာ့ခြောက်ဆယ်ပဲရှိမှာ…..။
ဒီကားကြီးမောင်းရင်း မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေ ယာဉ်ကြောပြောင်းပြန်မောင်းလာတဲ့ကားတွေ့ရင် တည့်တည့်သာ ခေါင်းတည်ပြီးတိုက်ပစ်လိုက်….
ရှေ့ကားနဲ့ထိဖို့ နှစ်စက္ကန့်အလိုမှာ ခေါင်မိုးပေါ်က လျှောလမ်းတစ်ခု သုံးဆယ့်ခြောက်ဒီဂရီအစောင်းနဲ့ ကျလာလိမ့်မယ်….”
“ အဲဒီတော့ ရှေ့ကားမောင်းတဲ့ကောင်က ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဟင်….. ”
“ အဲဒီကား လမ်းပေါ် ပက်လက်ပြန်မကျခင်တော့ ရိုလာကိုစတာစီးရသလိုဖြစ်မှာပေါ့….”
“ အားရိုးရိုး… ရက်စက်လှချေကလား…. ”
“ ကားမောင်းနေတုန်း အတင်းခေါင်းထိုးဖြတ်ဝင်တဲ့၊ လမ်းလယ်ခေါင် ခပ်တည်တည်ရပ်ပြီး လူတင်၊ လူချ၊ အတင်းပြော အကြွေးဆပ် ကွမ်းယာဝယ် တဲ့ ဘတ်စကားနဲ့ တက္ကစီတွေကိုတော့ ဒီခလုပ်အနီလေးနှိပ်ပြီး လက်ညှိုးထိုးလိုက်….
ဒုံးကျည်အသေးလေးတစ်ခုက ကားမှန်ကိုဖေါက်ပြီး ဆိုင်ကယ်ဘောစေ့လောက် ကျည်ဆန်လေး ဒရိုင်ဘာရှေ့ ကားကြမ်းပြင်ပေါ်ကျပြီး ပေါက်ကွဲသွားမယ်၊ အဲဒီက ထွက်လာမယ့် စပလင်တာလေးတွေမှာ အာဖရိကမုဆိုးတွေသုံးတဲ့ အကြောသေ ကြွက်သားပျော့ အဆိပ်သုတ်ထားတယ်…
ခြေသလုံးကို တစ်စလောက်မှန်ရုံနဲ့ နောက် ရှစ်နာရီက ခြောက်လအတွင်း ခါးအောက်ပိုင်းတစ်ခုလုံး ဘတ်လပ်တွဲလောင်းကြီးဖြစ်သွားမယ်…. ကားမောင်းဖို့ မစဉ်းစားနဲ့တော့…….
တန်းစီနေတဲ့ကားတန်းကြီးကို ဘေးကကျော်ပြီး မီးပွိုင့်နားကျမှ လက်ညှိုးထောင်ပြီး အတင်းဝင်တဲ့ ကားမျိုးတွေကို တွေ့ရင်တော့ မောင်ရင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး၊ ကားထဲက ဆင်ဆာက သူ့ဟာသူထောက်လှမ်းပြီး အဲသည်လက်ညှိုးကို လေဆာလမ်းညွှန် ဂျင်ဂလိနဲ့ ပစ်လိမ့်မယ်။
ကားရှေ့က ခပ်တည်တည်ပိတ်နင်းပြီး ဘယ်တော့မှလမ်းမဖယ်တဲ့ ဆိုက်ကားနဲ့တွေ့ရင်တော့ ကားခေါင်မိုးပေါ်က မောင်းတံတစ်ခုထွက်လာပြီး မိုးပျံပူဖေါင်းတစ်တွဲကို အဲသည်ဆိုက်ကားနဲ့ ချိတ်ပေးလိုက်လိမ့်မယ်။ မပူပါနဲ့ ….. မြောင်းပုပ်တခုပေါ်တည့်တည့်ရောက်ရင် အဲသည်မိုးပျံပူဖေါင်းတွေကွဲပြီး ဆိုက်ကား အောက်ပြန်ကျအောင်စီစဉ်ထားတယ်….။
ဘတ်စ်ကားပေါ်ကဖြစ်ဖြစ် လမ်းပေါ်မှာဖြစ်ဖြစ် စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ကွမ်းတံတွေးထွေးတဲ့သူတွေ့ရင် လက်ညှိုးနဲ့သာထိုးလိုက်-
မီလီစက္ကန့်အတွင်း စက်ဘီးဘောစေ့လောက်ရှိတဲ့ကျည်ဆံလေး သူ့ပါးစပ်ထဲ ၀င်သွားလိမ့်မယ်…
ကျည်ဆံမှာ တရုတ်သိုင်းကားထဲက နှစ်တစ်ထောင် အရိုးဆွေးအဆိပ်သုတ်ထားတယ်…
အဲသည်ကွမ်းတံတွေးထွေးတဲ့ကောင်တော့ နောက်တစ်ခါ ကွမ်းစားချင်ရင် သူများဝါးပြီးသားစားမှ ဖြစ်တော့မယ်….. သူ့သွားတွေ ပေါင်ဒါမှုန့်ဖြစ်ကုန်မှာကိုး…..
ကျုပ် အားအရဆုံးတီထွင်မှု့ကတော့ ဂျယ်လီသေနတ်ပဲ…….
မန်ကျည်းစေ့အရွယ် ဂျယ်လီကျည်ဆံ နှစ်သိန်းထည့်ထားတယ်…
ဒုတ်တွေထောင် တန်းတွေချ ၊ ပစ္စည်းပေါင်းစုံနဲ့ နေရာဦးအပိုင်စီးထားတဲ့
ဆိုင်ရှေ့ကားပိတ်မရပ်ရ၊ အိမ်ရှေ့ ကားမရပ်ရ လို့
ခပ်တည်တည် ဥပဒေမဲ့ လူပါးဝထားတဲ့ အောက်ထပ်တိုက်ခန်းတွေတွေ့ရင်
ကားရဲ့ ဆင်ဆာက သူ့ဘာသာထောက်လှမ်းပြီး
အိမ်ရှေ့ တံခါးပေါက်တည့်တည့် မြေပြင်ကို ဂျယ်လီကျည်ဆန်တစ်ခု ပစ်ချခဲ့လိမ့်မယ်…”
“ အဲသည်ကျည်ဆန်က ဘယ်လိုအစွမ်းရှိလို့လဲ….. ”
“ အဲဒီဂျယ်လီက ကျတဲ့နေရာမှာကပ်နေမယ်…
ခွေးတွေကို အလွန်ဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ရနံ့တစ်မျိုး ထုတ်လွှတ်မယ်….
ကိုက်သုံးရာအတွင်းက ရှိတဲ့ခွေး သုတ်ကနဲ ပြေးလာပြီးစားလိမ့်မယ်…..”
“ စားပြီးတော့……? ”
“ စားပြီးရင်တော့ စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းဝမ်းသွားစေတဲ့ အာနိသင်ရှိတယ် ”
“ အောင်မယ်ငီး………. ”
“ ဒါတင်ဘယ်ကမလဲ…… ၊ နောက်နှစ်လသုံးလအတွင်း အဲသည်ခွေး ၀မ်းသွားချင်ရင်အဲသည်နေရာကိုလာမှာ….. ”
“ ဒါပဲလား….. ”
“ တကယ်တော့ လမ်းပိတ်ရောင်းတဲ့၊ ကားမှတ်တိုင်မှာ နေရာယူပြီးရောင်းတဲ့ လမ်းဘေးဈေးသည်တို့ ၊ လမ်းတွေပေါ် ပိတ်ချထားတဲ့ အမှိုက်လှည်း၊ တိုင်ကီ၊ ပန်းအိုး၊ ဒန်း၊ ခုံတန်း၊ စားပွဲ တွေလိုပစ္စည်းတွေ တို့ ကို ဖြေရှင်းမယ့်နည်းလမ်းအပါအ၀င် တခြားဖန်ရှင်တွေ အများကြီးရှိသေးတယ်၊ မောင်ရင့်ဖါသာ အွန်စကရင် မဲန်နျူရယ်မှာရှာဖတ်တော့…
ကျုပ်ဗိုက်ဆာလာလို့ ဟော့ဒေါ့လေး ပြေးစားလိုက်ဦးမယ်…။ ”
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ Q က M ကိုလှမ်းကြည့်တော့ M က ခေါင်းဆတ်ပြတယ်…။
Q က နာရီသေတ္တာလေးကို အဖုံးပြန်ဖုံးပြီး လှမ်းအပေး…..
သေတ္တာအဖုံးပေါ်က ရွှေရောင် ဖေါင်းကြွစာတမ်းလေးကို အလင်းရောင်လေး ဖြတ်ပြေးသွားတယ်…
Licence to ….??. ဘာဆိုလား……………??.
(ကိုကြီးမိုက်အား သရုပ်ဆောင်အဖြစ် တွန်းပို့ပါသည်…)
စည်းမဲ့ ကမ်းမဲ့တွေ ကို အတော် အသည်းယားနေပြီထင်တယ်။
တျစ်ပယ် ဇီးရိုး ဆယ်ဘင်း မိုက်(စ) ကယ်မှပဲ ရတော့မယ်။
ပုံဖော်ကြည့်ပြီး ရီ လိုက်ရတာရယ်။
ရေးတုန်းကတော့ စည်းကမ်းမဲ့တွေကို တော်တော်တင်းလာလို့…
လမ်းဘေး ဝဲ/ယာက စည်းမဲ့ကမ်းပျက် ဘော့စ်တွေအတွက်ရော
ဒါ့ကြောင့် ဂျိမ်းစ်ဘွန်းနဲ့ မရလောက်လို့ သူ့ထက်မြင့်တဲ့သူကို ခေါ်ရတာ…
လုပ်တဲ့အထိ မရေးရဲဘူးလေ ကအောင်ပုရဲ့ …
တော်ကြာ ဆန္ဒပြခံနေရပါဦးမယ်… ဦးဦးပါရယ်..
စည်းကမ်းဖောက်ချင်သူ လူဦးရေက ပိုများနေတယ်…
ရေများရေနိုင် မီးများမီးနိုင် … တဲ့…
ကိုမိုက် ထွက်မပြေးအောင် ဆွဲထား…..
စည်ပင်လူဆိုး နွားဘဲဥ နဲ့ မထသသူရဲများ တျစ်ပယ် ဇီးရိုး ဆယ်ဘင်း မိုက်(စ) (cr ချွိ) ကို လုပ်ကြံရန် ကြံစည်နေပါပြီ..
အို… ကျုပ်တို့ဆီမှာ ယဉ်ကျေးကြပါတယ်ဗျာ…
၃၈ လမ်းဈေးနားမှာလိုလဲ လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ ၀ိုင်းရိုက်လေ့မရှိပါဘူး…
သိမ်ကြီးဈေး စီရုံဒေါင့်မှာလိုလဲ တက္ကစီသမား လေးဆယ်လောက် ဒုတ်တွေနဲ့ ၀ိုင်းတာမျိုး မလုပ်ကြပါဘူး…
​ ကမာရွတ်မှာလိုလဲ ပြိုင်ကား ငါးစီးနဲ့ လမ်းပိတ်ရိုက်တာမျိုးမလုပ်ပါဘူး…
အလုံမှာလိုလဲ ကလူဂါဖိုးဝှီးနဲ့ လိုက်မတိုက်တတ်ပါဘူး…
မင်္ဂလာဒုံ မှာလိုလဲ ……
ဦးပါ တာဝန်ပေးတာကို ဂျိမ်းစ် မိုက်စ် ၀မ်းမြောက်ဝမ်းသာလက်ခံပါ၏
ကျုပ်ကလည်း အဲသလို အပီကိုင်တွယ်ချင်နေတာဗျ
ဒီအဖွဲ့အနွဲ့လေးကိုတော့ လက်ဖျားခါတယ် ဦးပါ ရေ….
တောက်စ်…အရေးကောင်း ဒိန်းဒေါင်းဖျက်ဆိုတာ ဒါမျိုးပေါ့
အဲဒိနား ဖြတ်လိုက်ရတာက … ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကားနဲ့ တူအောင်လို့ပါ…
ဖျား ရှုး …..
အဟိ… မိုက်မိုက်ကို ခိုင်းယုံခိုင်းပီး သာယာရမဲ့နေရာကျ.. ဆင်ဆာဖြစ်တွားရော တော်တော်ဆိုးတဲ့ လေးပါ…
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းကားဆိုတာ ဇာတ်သိမ်းခန်းမှ ကောင်းတာ…
ကျုပ်က စိတ်ဆိုးလာရင် ရယ်စရာတွေ လျှောက်ပြောပြီးဖြေတယ်…
နောက်တစ်ခါ စိတ်ဆိုးမှ နောက်တစ်ကားထပ်ရိုက်ဦးမယ်…..
ဟယ်လီကော်ပတာ ဖြစ်ဖြစ်၊ လေယာဉ်ဖြစ်ဖြစ် သုံးပြီး
အဲ့ဒီမှာ သံလိုက်တုံးကြီးကို ချိတ်လို့ လှမ်းဆွဲသိမ်းပလိုက်ချင်ဒါ …
အဲဒီဇတ်လမ်းကို မထသ ၂၀၄ ကားကြီးပေါ် မတ်တပ်စီးရင်း စိတ်ထဲရေးတာ…
ကံကောင်းလို့ ခါးပိုက်နှိုက် အလှူခံမသွားတာပေါ့ …
ဒီလိုစည်းကမ်းဖောက်မှု… ဥပဒေမလေးစားမှုတွေကို.. အာမခံစနစ်နဲ့ရှင်းပစ်လို့ရတယ်လို့… ထင်မိတယ်..။
အဲဒီကားကြီးက The Beast ကို မျက်စေ့ထဲမြင်ယောင်ပြီးရေးတာ…
License to destroy ပေါ့
၂၀၁၅ မှာ ဒီနည်းလမ်းကို တင်ပြပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်၊ မြို့တော်ဝန်လုပ်ရင် သေချာပေါက် ရလောက်တယ် ဗျ သိလား
တစ်မဲ တော့ သေချာပြီ…
ဆရာပါ အဲဒီကားကြီး ခဏ ငှား ဗျာ
အဲဒါမျိုးတွေ တွေ့တိုင်း ဓါတ်ပုံပဲ လှိမ့်ရိုက်ထားတယ်
တွေ့ကြသေးတာပေါ့ ဆရာပါ မြို့တော်ဝန်ဖြစ်မှ ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေနဲ့ စာရင်းရှင်းတော့မယ်
အဲ ဇတ်ကောင်ရွေးလဲ တော်တယ် ဗျို့ ( တူ မှ တူ …)
အုတ်သဲကျောက် ပဲ တိုက် ရမလိုဖြစ်နေတယ် ကိုနိုရေ ….
ဦးပါ စိတ် ခဏခဏ ဆိုးအောင် ဆွပေးမှပဲ။ဒါမှ ဒီလို စိတ်ကူးကောင်းပို့စ်တွေ ထွက်လာမယ်။အဲဒီကားကြီး လိုက်စီးချင်တယ်။ဘရုတ်သုက္ခရိပ်သာရော တကယ်ဖွင့်မှာလား။
ဇာတ်လိုက်ကျော် ထရစ်ပယ်အို ဆဲဗင်းမိုက်စ် ကျမတို့ကို မုန့်ကျွေးပါ.ဇွတ်လိုက်ကြီး ဖြစ်သွားတဲ့ အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်။
ဘရုတ်သုက္ခရိပ်သာက ကျနော်တောင် မေ့နေပြီ…
တော်တော်ဘရုတ်သုက္ခတွေ တွေးခေါ်တတ်တဲ့ သူကြီးပါတကား….
မော်တော်ပီကယ် ဘဲဥပုတ်တွေ ကင်းပုန်းဝတ်ပြီး ပတ်ဆံတောင်းတာကို
ဘယ်လိုလက်နက်နဲ့ ဆုံးမမှာလဲ ဦးဦးခင်ဗျာ
အဲ့ဒါတော့ ခက်တာပဲ ကိုရင် ရာမညရေ….
ပါးရိုက်ခံရ ရေလာင်းခံရ တမျိုးလုံးဝိုင်းရိုက်ခံရတဲ့
မသကာ (မလိုလဲလိုလဲ) ဆလံပေးသွားတာမျိုးပဲ လုပ်ချင်လုပ်မှာ…
ဒါရိုက်တာ ဦးပါစိတ်ကူးစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းက ဇာတ်ကောင်က ဇာတ်နဲ့ အံ့ဝင်ခွင်ကျပဲ။
ဘွတ်နဲ့ ရွှတ်နဲ့ နေကာမျက်မှန်နဲ့ ပစ်စတိုနဲ့ ဂျိမ်းစ် မိုက်စ်ရဲ့ပုံကိုတောင် မြင်ယောင်မိသွားတယ်။
ဒါနဲ့ ဒါရိုက်တာကြီးဦးပါ ကိုဆိုရင် ဘယ်လိုဇာတ်မျိုးနဲ့လိုက်ဖက်မလဲလို့ စဉ်းစားမိတော့…..
`မင်းတော်တယ် မောင်ပြူး။ ပြန်လာရင် ဘောက်ဆူးကောင်းကောင်းပေးမယ်….´ ဆိုတဲ့နေရာကို မြင်မိတယ်။
တိုက်ဆိုင်လိုက်တာ မမ ရေ …
ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဦးရှံစား နေရာကထားပြီး ဇတ်လမ်းတွဲတစ်ခု ရေးမလားလို့စိတ်ကူးနေတာ…..
အဲဒီမှာတော့ ကိုစွယ်တော်ရွက်ကို ဦးဒိန်းဒေါင် နေရာမှာထားမလို့…..
လက်နက်အပြည့်အစုံနဲ့ အဲသည့်ကားကြီးလိုချင်တယ် ဦးပါ…
မင်ဂါမဆောင်ခင်ညက လှည်းတန်းပွိုင့်မှာ ရိုက်မှုဖြစ်ဦးမလို့…
လှည်းတန်းလမ်းမကနေ ပြည်လမ်းပေါ် ချိုးအကွေ့မှာ… တက္ကဆီငနဲ…
ကားကို ကွေ့လမ်းမှာ ပိတ်ရပ်ပြီး ကွမ်းစားရင် ခရီးသည်စောင့်နေတာလေ…
နောက်ကကားတွေကလည်းပိတ် ၊ စိတ်အတော်တိုလာလို့ ဆင်းဖြဲတော့…
ဂျစ်ကန်ကန်နဲ့လေ ၊ နောက်ကကားသမားနဲ့ ကျောက်စ် ဘီးဂေါက်ကိုင်ပြီးဆင်းမှ…
လစ်တော်မူရှာတယ် … ရိုက်ချင်လိုက်တာ လက်ကိုယားနေတာပဲ…
အဲ … ကျောက်စ်တို့လည်း မြေညီထပ်မို့ ဂျယ်လီကျည်ဆန်တော့ သီးခံပါဆြာ…
ပလက်ဖောင်းပေါ်တက် အိမ်ဝမှာကားဖင်ထိုးပြီး ရွှေကိုယ်တော်များ စက်နှိုးလိုက်ရင်…
ခြင်ဇကာတွေလည်း မဲ ၊ တအိမ်လုံးလည်း မွှန်ထူသွားတာပဲ…
မနက်ဆို အိမ်ပြင်ထွက်လို့မရအောင် ပိတ်ရပ်ထားတာ… ဆိုးချက်…
မရိုက်လိုက်ရလို့… စိတ်နာနာနဲ့.. ပြန်တယ်ပေါ့နော..။